﻿	မျိုးပွားနိုင်တဲ့ရက်တွေမှာ လိင်ဆက်ဆံလိုပါက ဘာလုပ်ရမလဲ? | Find My Method
မျိုးပွားနိုင်တဲ့ရက်တွေမှာ လိင်ဆက်ဆံလိုပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » မျိုးပွားမှုအသိအမြင် » မျိုးပွားနိုင်တဲ့ရက်တွေမှာ လိင်ဆက်ဆံလိုပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?
ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေ့တွေမှာ လိင်မဆက်ဆံဖို့ မသေချာပါက မျိုးပွားမှုအသိပညာအခြေပြုနည်းလမ်းတွေအပြင် မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်တဲ့ အခြားနည်းတခုခုသုံးပါ။ ဟိုမုန်းတွေကို ရှောင်ရှားချင်ရင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးကွန်ဒုံ၊ diaphragmအမြှေးပြား၊ သုတ်ပိုးသေဆေးပါတဲ့ သားအိမ်ခေါင်းအဖုံး၊ ဒါမှမဟုတ် ရေမြှုပ်တို့ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ မျိုးပွားမှုအသိပညာအခြေပြုနည်းလမ်းတွေဟာ သင့်အတွက်အဆင်မပြေပဲ ဟိုမုန်းမပါတဲ့နည်းလမ်းပဲလိုချင်ပါက ParaGard IUDကိုစဥ်းစားပါ။ ၎င်းဟာ ဟိုမုန်းမပါပဲ သိပ်အလုပ်လုပ်စရာမလိုလှပါ။
Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 4: Natural Family Planning. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. မှရယူရန် https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39375-6/pdf